घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू पोर्तुगाली फुटबल खेलाडीहरू सेड्रिकले बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू बढायो
हाम्रो सिड्रिक सोरेस बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी (फिलिप ब्रान्डिओ), छोरी (सिएना), जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन, आदि बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा हामी पोर्तुगाली फुटबलरको जीवन इतिहास चित्रण गर्छौं जसले आफ्नो नाम राष्ट्रिय र क्लब फुटबलमा राखेका छन्। सेड्रिक पूर्ण कहानी को यो संस्करण को शुरुवात देखि शुरू भयो जबदेखि उनी खेलमा प्रख्यात भए।
सेड्रिक सोरेस बायोग्राफीको आकर्षक प्रकृतिमा तपाईंको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, उसको प्रारम्भिक जीवन र उदय ग्यालरी हेर्नुहोस्। तपाईं मसँग सहमत हुनुहुन्छ कि यसले आफ्नो बायोको सारांश दिन्छ।
Cedric Soares को जीवनी। उनको प्रारम्भिक जीवन र उदय हेर्नुहोस्।
तपाईं र मलाई थाहा छ उहाँ एक भरपर्दो फिर्ता हुनुहुन्छ, जसले क्रस र ट्याकलहरू बनाउने कार्यमा महारत हासिल गर्नुभयो।
प्रशंसकको बावजुद, हामीले पत्ता लगायौं - केहि प्रशंसकहरूले सेड्रिक सोरेज लाइफ स्टोरी पढेका छन्। हामीले यसलाई फुटबलको प्रेमको लागि तयार गरेका छौं। अब थप विज्ञापन बिना, हामी सुरु गरौं।
सेड्रिकले बचपनको कथा बढायो:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उहाँ पूरा नाम Cédric Ricardo Alves Soares CvIH ComM बोक्नुहुन्छ। पोर्तुगाली फुटबलर अगस्त १ 31 1991 १ को जर्मनीको सिगेन शहरमा in१ औं दिनमा जन्म भएको थियो।
सेड्रिक सोर्स दुईजना छोरा मध्ये एकको रूपमा संसारमा आए (उनको र केभिन सोरेस) उनका प्यारा आमाबुबाको बीच मिलनबाट जन्मे, जसलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ।
सेड्रिक माउन्ट्स सोरेस। फुटबलरसँग उसको आमाको देखिन्छ।
जे होस् जर्मनीमा जन्मिए पनि सेड्रिक सोरेसका अभिभावक पोर्तुगलका हुन्। तिनीहरू एक पटक सानो सिड्रिक दुई वर्षको समयमा आफ्नो मातृभूमि फर्कन सुरु गरे।
घर फर्किए पछि परिवार पोर्चुगलमै रहे। सेड्रिक आफ्नो जेठो भाइसँगै हुर्किए, जसको नाम केभिन थियो।
दायाँ-पछाडिका लागि, बचपनका दिनहरू रमाइलो सम्झना र राम्रा क्षणहरूले भरिएका थिए। उनले एकपटक आफ्ना प्रशंसकहरूलाई आफैंको र केभिनको प्रारम्भिक फोटोहरू प्रस्तुत गरे जुन उनीहरूको ठूला भाई उसको जीवनमा कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ भनेर जोड दिएका थिए। सेड्रिकले कल गर्दछ - १ 1990 XNUMX ० को भाइबस।
सेड्रिक र उसको जेठो भाई केभिन उनीहरूको बाल्यावस्थाका दिन साथीहरू थिए।
ठूलो बचपन सपना:
सेड्रिकको सानै उमेर र प्रिस्कूल वर्षदेखि फुटबल आकांक्षाहरू हुन थाले। सानो छँदा, उनले एक पेशेवर फुटबलर बन्ने र उनको मूल देश - पोर्तुगल प्रतिनिधित्व गर्ने सपना देखे।
सेड्रिक परिवार पृष्ठभूमि बढ्दो:
फुटबलर मूलको सबैभन्दा नम्रबाट आएको हो, र फुटबलको लागि धन्यवाद, उहाँ अब एक ठूलो केटो हुनुहुन्छ, जसले अथाह सम्पत्ति बटुल्नुभयो। सेड्रिक एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आउँदछ।
पुर्तगाली सिभिल कर्मचारीहरू जसले काम गरेका थिए, त्यस्तै फुटबलरका बुबासँग उत्तम वित्तीय शिक्षा थियो र कहिले पनि पैसाको साथ संघर्ष गरेन।
सेड्रिकले एक पटक आफ्नो बुबाको बाल्यकालको फोटो रिलिज गरे पछि उनले उनलाई र केभिनलाई स्कूलमा छोडे पछि उनी आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा जानु अघि। यसले उसको नम्र शुरुआत देखाउँदछ, र आफ्नो परिवारको देखभाल गरेकोमा बुबाले यसको कदर गरेको छ।
सेड्रिक सोरेस ड्याडलाई भेट्नुहोस् किनकि उहाँ दुबै र केभिन दुबै स्कूलमा काम गर्न जानु अघि जानुहुन्छ।
सेड्रिक परिवारको उत्पत्ति बढ्छ:
तपाईं उसलाई जर्मन पोर्तुगाली भन्न सक्नुहुनेछ किनकि उहाँ पोर्तुगाली हुनुहुन्छ जर्मनीमा जन्म। सिन्जेन (सेड्रिक सोरेसको जन्मस्थल) एक औद्योगिक शहर हो जुन दक्षिणी जर्मनीमा अवस्थित छ, जर्मन-स्विस सीमाको उत्तरमा।
फुटबलरका अभिभावक पुर्तगाली आप्रवासीहरू हुन् जसका परिवारहरू उनको जन्मभन्दा धेरै अघि नै जर्मनीको लागि आफ्नो देश छाडे।
सेड्रिक सोर्स शिक्षा:
पोर्चुगलमा, उहाँ, बिग ब्रदर केभिनसँगै, स्कूली शिक्षाको माध्यमबाट जानुभयो। To देखि five वर्षको उमेरदेखि, सेड्रिकले पोर्तुगलमा आफ्नो प्राथमिक-प्राथमिक शिक्षा सुरू गर्‍यो। आधारभूत शिक्षा दुबै स्कूली शिक्षा र धेरै फुटबलमा मिश्रित भयो - सबै उसको बाल्यकाल सपनाको खोजीमा।
सिड्रिक फुटबल फुट्छ कथा:
जब समय ठीक भयो (आठ वर्षको उमेरमा), जवान आमाबाबुले उसलाई अल्कोचेट लगे। त्यहाँ छँदा, सेड्रिकसँग स्पोर्टि CP सीपी युथ एकेडेमी ट्रायलहरू थिए जुन उनले उडान रंगहरूमा पार गरे।
तल चित्रण गरिएको, खुसीको सेड्रिक केटाहरूको सूचीमा थिए जुन १ lucky 1999। मा स्पोर्टि de्ग डि लिस्वाको खदानमा स्वीकार्य हुन भाग्यशाली थियो।
यो वर्ष १ 1999 XNUMX। थियो जब सेड्रिक सोयर्स एकेडेमिया स्पोर्टि joinedमा सामेल भए।
प्रारम्भिक जीवन खेलमा:
सुरुदेखि नै, केटाले आफ्नो बाल्यावस्थाको सपनाहरुमा धकेल्न कडा संकल्प गरे। सबैले मन पराउछन्, सेड्रिक सधैं आफ्नो अतुलनीय फुटबल शक्ति प्रदर्शन प्रदर्शन को मामला मा पहिलो आए।
उदाउँदो तारा एकेडेमी उमेर समूहहरू मार्फत द्रुत रूपमा प्रगति भयो। उसको परिपक्वता र खेलको शैलीका लागि धन्यबाद, उहाँ त्यस्तो प्रकारको बच्चा हुनुहुन्थ्यो जुन उमेर र ठूला खेलाडीहरूको सामना गर्न सदैव तैनाथ गरियो। अन्तमा, सेड्रिक जहिले पनि उत्कृष्ट हुन्छ।
सेड्रिक सोरेस सबै प्रकारका लुकाकू-प्रकारका विरोधीहरूको बिरूद्धमा फस्टाए - जो उनी भन्दा ठूला, ठूला र बलियो थिए।
युवा ड्राइभ र दृढ संकल्प उसको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति बन्न पुग्यो जब उनी युवा वर्गमा सर्दछन्। अपेक्षानुसार, सेड्रिक सोर्स कडा परिश्रम बिना कुनै पुरस्कार र सम्मान बिना आएन।
उसको किशोरावस्थामा पुग्न, हाम्रो केटाले ग्रीन र गोरालाई प्रमुख ट्राफीहरू जित्न मद्दत गर्न थाले। खेलकुद युवा स्तरमा उनको सफलता जस्तै थियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो र राफेल लिओ.
सिड्रिक सोर्सले एकेडेमीया खेलमा धेरै सफलता हासिल गरे।
कन्या जन्मले गरेको प्रगतिले पोर्तुगाल राष्ट्रिय युवा पक्षको व्यवस्थापनलाई चिन्तित बनायो। आफ्नो परिवारको आनन्दको लागि, जवान सेड्रिक पोर्तुगालको U16 पक्षमा सम्मिलित हुन बोलाइयो।
सेड्रिक Soares जीवनी - फेम कहानी कहानी:
उदाउँदो दायाँ-पछाडि १२ वर्ष (१ –– – -२०१०) एकेडेमिया स्पोर्टि atमा आफ्नो बचपनको सपनाहरूको पहिलो अंश प्राप्त गर्न अघि बितायो। त्यो विश्व कप वर्षमा, सेड्रिकले स्पोर्टि CP सीपीसँग एक पेशेवर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
सिड्रिकले पहिलो टीमको साथ May मे २०११ मा सफल प्राइमिरा लीगा डेब्यू गरे। त्यो वर्ष उनी २०११ को फिफा यू -२० विश्वकप कोलम्बियामा उल्लेखनीय स्टारहरू मध्ये एक बने। सेड्रिकले पोर्तुगललाई दोस्रो स्थानमा टूर्नामेन्ट समाप्त गर्न मद्दत पुर्‍यायो।
Experण अनुभव खोज्दै:
२०११-१२ सत्रमा, टीम्रो साथी एड्रिन सिल्वासँगै सेड्रिकलाई साथी शीर्ष डिभिजन क्लब एकेडेमिकामा edण दिइयो। त्यहाँ उसले नियमित रूपमा खेलायो र टिमलाई सिजनको टाटा डि पोर्चुगल जित्न सहयोग पुर्‍यायो।
स्पोर्टि Return रिटर्न:
पछि, loanण मार्फत आफ्नो बाँकी तिर्ने पछि, सिड्रिक लिस्बन तर्फ फर्कियो। धेरै वर्षको ब्यवस्थापकहरू अन्तर्गत उनी पछिका वर्षहरूमा पहिलो विकल्प बने। उसको अकाडेमिका loanण अनुभव जहाजमा ल्याएर, हाम्रो केटाले स्पोर्टि theirलाई उनीहरूको टाçा डे पोर्तुगल ट्रफी जित्न सहयोग पुर्‍यायो।
पोर्तुगाली प्रदर्शनले खेलकुदका लागि प्रबन्धक फर्नांडो सान्तोसको राष्ट्रिय टोली बोलायो। त्यो मात्र होईन, उनको खेलले युरोपको आसपास फुटबल क्लबबाट धेरै चासो आकर्षित गर्न थाल्यो।
Cedric Soores Bio - सफलताको कथाहरू:
१ June जुन २०१ 18 मा, उदाउँदो ताराले इ family्ल्यान्डमा नयाँ जीवनको लागि आफ्नो परिवारलाई पुर्तुगालमा छोडिदिए। Cédric साउथेम्प्टन एफसी को लागी दोस्रो गर्मी हस्ताक्षर को रूप मा घोषणा गरीएको थियो।
कम्पन दायाँ पछाडि क्लब अन्तर्गत छाप बनाउन द्रुत थियो रोनाल्ड कोमेन। यो उपलब्धि सहयोगले उईफा यूरो २०१ 2016 को लागी उहाँको नाम छोटोसूचीमा राखियो।
यूईएफए यूरोपीयन च्याम्पियनशिप जीत:
प्रबन्धक फर्नांडो सान्तोसले Cédric लाई UEFA यूरो २०१ squad टीमको लागि आफ्नो दायाँ-पछाडि एक प्रमुखको रूपमा छनौट गरे। १ 2016 को राउन्डमा साउथेम्प्टनका साथी जोसे फोन्टेसँगै सुरु गरेर, उनले फाइनलसम्म आफ्नो स्थिति कायम राख्यो।
अन्तमा, सेड्रिकले आफ्नो जीवनकालको सपना हासिल गरे। साथमा रुई पाट्रसियो, C रोनाल्डो, राफा सिल्वा (एससी ब्रागा), एन्ड्रय गोम्स (Valência) र Raphael Guerreiro (लोरेन्ट), उनले आफ्नो देशलाई फाइनलमा पुग्न मद्दत गरे। यो त्यहाँ अन्त थिएन; पोर्तुगल चैम्पियनको रूपमा ताजपोख भयो.
इन्टर मिलान चुनौती:
२ January जनवरी २०१ 26 मा, सिड्रिक नेराज्जुरीलाई loanणमा अगाडि बढाए। उनले क्लबमा खेल्नको लागि आफ्नो सबै यूरो २०१ 2019 को अनुभव ल्याए, उनीहरूको ठूलो जीतमा उनीहरूलाई मद्दत गर्दै।
निम्न माइकल अर्टेटाको डिसेम्बर २०१ around को वरिपरि भेट, नयाँ गनर्स प्रबन्धकलाई सख्त अनुभवी दायाँ-पछाडि जगेडाको रूपमा चाहिएको थियो हेक्टर बर्लरिन। एक महिना पछि, आर्सेनल हस्ताक्षरकर्ता सेड्रिक Soares loanण मा - जनवरी २०२० स्थानान्तरण विन्डोको बखत।
अनुभवी यूरो २०१ winner विजेता गनर्सका लागि दायाँ-पछाडिको भन्दा बढी भयो। उसको बहुमुखी प्रतिभाले उनलाई भर्दै गरेको देख्यो किरेर टिर्ने उनको चोट को समयमा।
गनर्ससँग, सेड्रिकले एफए कम्युनिटी शिल्डको सपना देखे र आर्सेनलसँग यसलाई प्राप्त गर्न अघि बढे।
अहिले सम्म, श्री स्थिरता क्लब र देश दुबै को लागी शानदार छ। आर्सेनल संग स्थायी दीर्घकालीन सम्झौता संग, उनी पक्कै पनि निम्न पक्षमा छन् Emmanuel Eboue को एक क्लब (दायाँ-पछाडि) लिजेन्ड बन्न मनपराउँछ। बाँकी, हामी उनको जीवनी को भन्छ रूपमा अब इतिहास हो।
फिलिप ब्रान्डिओको बारेमा, सेड्रिक 'श्रीमतीको मृत्यु भयो:
११ डिसेम्बर १ 11 1989। मा जन्मेकी (दुई बर्षे जेठ), उनी हुन् जसले पोर्तुगाली ताराको मुटु चोरी गरे।
फिलिपा ब्रान्डियो एक इन्स्टाग्राम सेलिब्रिटी हो जसले 40,000०,००० भन्दा बढी अनुयायीहरूलाई सिन्टाइलेटिंग फोटोहरूको साथ मनोरन्जनमा खुशी पुर्‍याउँछन्।
फिलिप र सेड्रिकको भेट २०१ 2015 मा भयो जब उनी साउथेम्प्टनमा सामेल भए। वर्षौंसम्म सँगै बसे पछि, यूरो २०१ winner को विजेताले ठूलो प्रश्न पप गर्ने निर्णय गर्यो।
Cedric Soares Filipa Brandão विवाह:
डिफेन्डर र उनको पोर्तुगाली पत्नी, जो दुई वर्षको जेनिर छन्, जून २०१ Lis को आसपास लिस्बनको छेउ सिन्ट्रामा उनीहरूको विवाह भयो। उपस्थितिमा सेड्रिक सोरेस र फिलिप ब्रान्डो दुवैको नजिकका साथीहरू र परिवारका सदस्यहरू थिए।
उनीहरूको विवाहको डेढ बर्ष पछि, आर्सेनल स्टार र उनको तेजस्वी पत्नीले सियाना नामको पहिलो बच्चाको अनावरण गरे पछि प्रशंसकहरूलाई चकित पारे। केवल सेड्रिक र फिलिप (अरू केहि अरू) लाई थाहा छ, उनले आफ्नो गर्भावस्थालाई एउटा ठूलो गोप्य राखिन्। यहाँ सेड्रिक आफ्नो छोरी सिएना सोर्स सोधे केही क्षण पछि उनी संसारमा आईन्।
सिड्रिक र उनको आनन्द को बन्डल Siena Soares हेर्नुहोस्।
सेड्रिक निजी जीवन बढायो:
त्यहाँ केहि फुटबलरहरू छन्, जब तिनीहरू प्रसिद्ध र धनी हुन्छन्, साधारण स्थानहरूमा स्पट गर्न सकिदैन।
यो सेड्रिक Soares को मामला मा छैन। पूर्ण ब्याक त्यस्तो प्रकार हो जसले कुनै पबको संरक्षण गर्दछ। यहाँ, उसले आफ्नो मनपर्ने खाना र एक क्यापुचिनो लिने चित्रण गरिएको छ।
सिड्रिक सोर्सले कहिल्यै आफ्नो मनपर्ने खाना र पेय पदार्थ हराउँदैन।
विशाल कुकुर प्रेमी:
साथै, एक व्यक्तिगत नोट मा, सेड्रिक एक विशाल पशु प्रेमी हो। उनि सही कुकुरहरु संग पागल छ। दुबै (तल चित्रमा) उसको जीवनमा धेरै नै अर्थ भएको छ।
एक सेड्रिक सोरेस कुकुर (कालो एक) लाई रोमु भनिन्छ। तिनीहरू अविभाज्य छन्।
सेड्रिकले रोमियोलाई (गाढा कुकुर) लाई उच्च उर्जा प्रशिक्षण साझेदार भने। यहाँ एक भिडियो छ जहाँ पूर्ण-ब्याकले सुन्दर मौसमको फाइदा उठायो आफ्ना कुकुरहरूको प्रशिक्षित प्रशिक्षण सत्रको लागि, साथै उनी अर्को जर्मन शेफर्डसँग आराम गर्ने समय।
सेड्रिक Soares जीवनशैली:
सबैभन्दा पहिला, ऊ फुटबलरको प्रकार हो जसले प्रशंसकहरूलाई ऊ कति ठूलो मान्छे देखाउँछ। सिड्रिक सोर्स लाइफस्टाइल सेक्सनमा, हामी उसको सम्पत्ति अनावरण गर्नेछौं। अर्को शब्दहरुमा, उसले पैसा कमाउँछ मा जान्छ।
सेड्रिक Soares कार:
फुटबलर र उनको आकर्षक चक्र फिट देखिन्छ। सेड्रिक ज्याला पहिले नै आफ्नो कुनै पनि सपना कार किन्नको लागि माथि छ। उसले यो सवारी एक पटक क्याप्शन - केटाहरू र उनीहरूका खेलौनाको साथ आफ्नो इन्स्टाग्राममा अपलोड गर्यो।
यो सेड्रिक Soares कार छ।
हेलिकप्टरका लागि माया:
विपरीत नेमार, जसको आफ्नै अनुकूलित छ, सेड्रिकको आफ्नै स्वामित्व छैन तर व्यवसाय र अन-आधिकारिक कारणहरूको लागि निजी हेलिकप्टर भाडामा लिने रमाईलो छ। हामी उनलाई यहाँ चित्रण गर्छौं, उहाँ बोर्डिदै हुनुहुन्छ भन्नेमा पोष्ट गर्दै।
सेड्रिक सोर्स हाउस:
पोर्तुगाली घरमा एक राम्रो बालकनी दृश्य छ जुन उसको फुटबलको पैसाको मोल छ। फेरि, यो पोश हेर्ने भन्दा तुलनात्मक ढंगले छ। सेड्रिक आफ्नो घरको खेलमा खेलिरहेका खेलहरूमा धेरैजसो समय खर्च गर्दछ।
यो सेड्रिक Soares घर छ।
सेड्रिक र फिलिप समुद्री किनार बिदाको प्रशंसकहरू हुन्। तिनीहरू युरोपका केही प्रसिद्ध समुद्र तटहरूमा हिट गर्न मन पराउँछन् जहाँ उनीहरू चर्को घामको बास्किंगमा रमाउँथे।
पोर्तुगाली पूर्ण-फिर्ता को लागी, एक शानदार जलीय छुट्टी जेट स्की को मजा बिना पूरा गर्न सकिदैन।
सेड्रिक पारिवारिक जीवन बढ्यो:
जर्मन पोर्तुगाली मूलका लागि, उनले आफ्नो घरपरिवारमा बाँड्ने प्रेम जीवनको सबैभन्दा ठूलो आशिष हो। यो एक हो जुन फुटबल पैसाको कुनै पनि रकमले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
सेड्रिक सोअर्स बायोको यो खण्डले उसको परिवारको बारेमा अझ बढी तथ्य चित्रण गर्दछ। थप विज्ञापन बिना, हामी सुरु गरौं।
सँगै, तिनीहरू एक खुशी परिवार बनाउँछन्।
सिड्रिक सोर्स फादरको बारेमा:
हामी उहाँलाई बुबाको रूपमा वर्णन गर्दछौं, जसले आफ्नो कडा परिश्रम र परिश्रमको फल फलायो। प्रारम्भमा, उनले युवा सेड्रिकलाई आफ्नो सपनाको अनुसरण गर्न अनुमति दिए उनको केटाको फुटबल वा केहि चाहँदैन भनेर बुझेपछि।
कहिलेकाँही, सेड्रिक सोरेस बुबा लन्डन भ्रमणहरू भुक्तान गर्दछन्। उसले शहरको संग्रहालयहरूको भ्रमण गर्छ र सेड्रिक, फिलिप र सियानासँग गुणस्तरीय समय पनि खर्च गर्दछ।
सेड्रिक Soares बुबा भेट। मानिस जसले उसको लागि धेरै बलिदान दियो।
सिड्रिक बढेको आमाको बारेमा:
युरो २०१ 2016 को विजेताहरूको यो सेटको उत्पादन गर्नेहरूमध्ये महान आमाहरू पनि थिए। वास्तवमा, यो महिला एक अपवाद छैन।
सेड्रिकको आमाले यो फोटो लन्डनको मैडम तुसाद म्यूजियममा लिनुभयो। के देखिन्छ त्यो देखि, उनी ब्यारेक ओबामा को एक विशाल प्रशंसक हो।
सेड्रिक Soares आमा भेट्नुहोस्। उनी ओबामाको ठूलो प्रशंसक हुन्।
सिड्रिक सोर्स भाईको बारेमा:
केभिन सोअर्स उहाँको नाम हो। उनी सेड्रिकका जेठा दाइ हुन्, जसले फुटबलरलाई जीवन मूल्यहरूका बारे अझ बढी बुझ्न मद्दत पुर्‍यायो।
उसको सानो भाई जस्तो नभई, केभिनले फरक क्यारियरको बाटो लिए, र उनी यससँग सहज छन्। अधिक, सेड्रिक परिवारको रोटी जुटाउने व्यक्ति हो। दुबै सोरेस भाइहरू धेरै नजिक छन्। हामी उनीहरूलाई यहाँ मियामीमा छुट्टीको समयमा रमाईलोको कल्पना गर्छौं।
एक मजबूत बन्धन सेड्रिक Soares र केभिन, आफ्नो भाई बीच अवस्थित छ।
सेड्रिक soares हजुरबुवा:
आर्सेनल डिफेन्डरसँग एक पटक उसको ग्रान्पा थियो, जसलाई उनी धेरै मन पराउँथे। दुःखको कुरा, उहाँ अब हुनुहुन्न। एउटा कुरा पक्का छ, किनकि सेड्रिकले उनको लेट ग्र्याम्पले सिकाएको शिक्षा र मूल्यहरू भुल्न सक्दैनन्।
सेड्रिक Soares 'हजुरबुवा भेट्नुहोस्। दुःखको कुरा, उहाँ ढिला हुनुहुन्छ।
सेड्रिकले हजुरआमालाई बढाए
धन्यबाद, उहाँको ग्र्यामी धेरै सक्रिय छ, उनको उमेर भन्दा धेरै। मैले यो जीवनी रचना गर्दा (मार्च २०२१) उनी भर्खर 2021 88 वर्षकी भएकी छिन्। सेड्रिक हरेक जनवरी २ 23 मा उनको जन्मदिन मनाउँछिन्। यी दुईको साथ कहिल्यै सुस्त क्षण छैन।
सिड्रिक सोर्स धेरै हजुरको हजुरआमा संग जोडिएको छ।
सेड्रिक soates तथ्यहरु:
तपाईको बायो भर तपाईसँग यात्रा गरिसकेपछि, हामी हाम्रो अन्तिम अनुभागलाई पूर्ण ब्याकको बारेमा अझ बढी सत्यता अनावरण गर्न प्रयोग गर्नेछौं। थप विज्ञापन बिना, अगाडि बढौं।
तथ्य # 1 - आर्सेनल वेतन ब्रेकडाउन र औसत नागरिकसँग तुलना:
तपाईंले सेड्रिक सोर्सहरू हेर्न सुरु गर्नुभयो'बायो, यो उसले आर्सेनलसँग कमाएको हो।
पाउण्डमा आर्सेनल वेतन (£)
यूरोमा आर्सेनल वेतन (€)
प्रति वर्ष: £ 3,385,200 € 3,930,477
प्रति महिना: £ 282,100 € 327,539
प्रति हप्ता: £ 65,000 € 75,470
प्रति दिन: £ 9,285 € 10,781
प्रति घण्टा: £ 386 € 449
प्रति मिनेट: £6€ 7
प्रत्येक सेकेन्ड: £ 0.10 € 0.12
के तपाईंलाई थाहा छ?… UK£,००० (वार्षिक) कमाउने बेलायतको औसत नागरिकले आर्सेनलमा सेड्रिक सोर्सको साप्ताहिक तलब बनाउन आठ बर्षसम्म काम गर्नुपर्नेछ।
तथ्य # २ - सेड्रिक बढेको प्रोफाइल (फिफा):
जब उनी सेवानिवृत्त हुन्छन्, फुटबल फ्यानहरूले सिड्रिकलाई सन्तुलन र आन्दोलनका लागि याद गर्थे जुन उसले खेलमा ल्याउथ्यो। दायाँ-पछाडि ठूलो हुन्छ जब यो शक्ति, मानसिकता र कौशलताहरूको लागि आउँदछ।
सेड्रिक सोरेससँग द्रुत उगने ताराहरूको जस्तो उस्तै खेल शैली रहेको छ रेस जेम्स र Ki-Jana तथापि.
तथ्य #3- सेड्रिक धर्ममा वृद्धि भयो:
उनका बाबुआमाले उनलाई एक क्रिश्चियन केटाको नाम दिए (सेड्रिक), जसको अर्थ हो "दयालु" र "मायालु"। साथै, यस फुटबलरको जन्म ईसाई क्याथोलिक परिवारमा भएको थियो। सेड्रिक पोर्तुगाली क्याथोलिक जनसंख्याको 80०% भन्दा बढी हो।
सेड्रिक सोरसको जीवनी आगामी फुटबलरहरूलाई आत्मनिर्णयको बारेमा सिकाउँदछ। सानो छँदा ऊसँग आफ्नो भविष्य नियन्त्रण गर्ने क्षमता थियो।
आफ्ना बाबुआमा, जेठो भाई (केभिन) र प्रशिक्षकहरूको सहयोगमा सेड्रिकले आफ्नो लामो बाल्यकालको सपना पूरा गरे।
जर्मन जन्मजात पोर्तुगाली फुटबलरको जीवन कहानीमा अबसम्म Lifebogger साथ रहनुभएकोमा धन्यवाद।
हाम्रो टीम निष्पक्षता र सटीकता संग वितरित गर्न कोशिस गर्दछ, पोर्तुगाली फुटबलरहरू कथाहरू कृपया यदि तपाइँ केद्रीय मा हाम्रो बायो मा ठीक लाग्दैन कि केहि देख्नुभयो भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तलको तालिकाले सेड्रिक सोर्सको बारेमा बायोग्राफिक सोधपुछका लागि उत्तरहरू प्रदान गर्दछ।
पुरा नाम: सिड्रिक रिकार्डो एल्वेस सोर्स
जन्म मिति: August१ अगस्त १ of 31 १
जन्मस्थान: सिन्जेन, जर्मनी
अभिभावक: श्रीमती र श्रीमती एल्वेस Soares
सिबलिंग: केविन सोअर्स (एल्डर भाई)
पत्नी: फिलिप ब्रान्डियो
बच्चा: Siena Soares
धर्म: ईसाई धर्म (क्याथोलिक)
नेट मूल्य: १ million मिलियन पाउन्ड (२०२१ तथ्या )्क)
खेल्ने स्थिति: ठीक पछाडि
उचाइ: १.1.72 ० मिटर वा feet फिट inches इन्च
शिक्षा: स्पोर्टिंग सीपी युवा एकेडेमी
स्पोर्टिंग सीपी फुटबल डायरी
पेड्रो Goncalves बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
जन बेडनारेक बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू